Sary sy Lahatsary Mampiseho Ny Fandringanana Goavana Tao Marawi Faritra Miady Any Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2017 14:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, Italiano, Aymara, বাংলা, Português, русский, Türkçe, English
Trano rava ao an-tanàndehiben'i Marawi efa madiodio. Sary avy amin'i Maulana Mamutuk, nahazoana alàlana.
Tamin'ny 23 May 2017, nanafika ny faritra sasany tao an-tanàndehiben'i Marawi any amin'ny faritra atsimon'i Filipina, nosy Mindanao, ny vondrona voalaza ho manana rohy amin'ny ISIS. Ho setrin'izany, nanambara lalàna miaramila tao Mindanao ny governemanta mba hanenjehana ny mpanafika sy ho fisorohana ny fihanaky ny ISIS any amin'ny tanàndehibe hafa.
Nahatonga ny famindrana toerana faobe ny mponina Marawi ny fifandonana teo amin'ny tafika sy ny vondrona mpikatroka antsoina hoe Maute Tamin'ny 7 Jona , fianakaviana mihoatra ny 46.000, na olona miisa 220.000 no nafindra toerana avy amin'ny fonenany. Nilaza ny governemanta fa nanome foibe fialofana miisa 33 izy ireo , kanefa olona miisa 18.000 ihany no afaka mialoka ao .
Taorian'ny ady nandritra ny telo herinandro, rava ireo trano an-jatony sy tranobe hafa tao Marawi. Naseho ny halehiben'ny fahavoazana rehefa nandefa sary sy lahatsarin'ny tanàndehiben'i Marawi efa madio ny mpamonjy voina, ny mponina, ary ny mpanao gazety.
Nomena tsiny noho ny fahasimbana ny vondrona Maute, kanefa voatazona ho tompon'andraikitra ihany koa ny miaramila noho ny fanafihana an'habakabaka mitohy. Nilaza ny miaramila fa nanao kendry tsara amin ‘ny ‘fanafihana amin'ny baomba’ izy ireo, kanefa lazain'ny mponina sasany fa mitifitifitra tsy misy fanavahana ry zareo amin'ny fandatsahana ny baomba .
Nalahelo noho ny fandringanana nitranga tao an-tanàndehibeny i Majul Gandamra, ben'ny tanàna ao Marawi:
Mitomany aho noho ireo olon-tsotra rehetra novonoina tsy nananana antra, mitomany noho ireo tranon'ny vahoakako rava aho sy noho ny fahaverezan'ny tena maha-finoana Islamo ao amin'ireo olona izay nahatonga ireo fahasimban'ny fiainantsika sy ny fananantsika ireo .
Tamin'ny 30 May, nilaza ny governemanta fa sivily miisa 19 no novonoin'ny mpampihorohoro .
Ny olom-pirenena tsotra no tena niaritra fijaliana lehibe indrindra raha mbola mitohy ny krizy. Mbola asa sarotra ny fananganana indray an'i Marawi na dia hifarana tsy ho ela aza ny fifandonana noho ny fahasimbana vokatry ny ady teo amin'ny miaramila sy ny mpitolona mitam-piadiana.
Ireto ambany ireto ny sary sy lahatsary mampiseho ny zava-misy ao Marawi amin'izao fotoana izao:
Ireo miaramila nanadio ny tanàndehibe tao Marawi. Sary avy amin'i Najib Zacaria, nahazoana alàlana.
Fiara mifono vy sy miaramila naparitka tao Marawi mba handringanana ireo mpikambana sisa tavela tamin'ny vondrona Maute . Sary avy amin'i Najib Zacaria, nahazoana alàlana.
Làlana nanjary lasa tsy nisy olona intsony izay toerana be olona mahazatra ao Marawi. Sary avy amin'i Maulana Mamutuk, nahazoana alàlana.
“Tanàndehiben'i Marawi ity fa tsy Aleppo. ” hoy ilay mpitati-baovao ao amin'ny fahitalavitra Gerg Cahiles. Sary: Facebook sy Instagram
Lavarangana natao foibe vonjimaika hoa n'ny famindrana toerana. Hitantsika eto ny mponina sasany milahatra mba hahazo fanampiana avy amin'ny governemanta ao an-toerana . Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny govenemantan'ny Tanàndehiben'i Marawi.